တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
Sedatives & Hypnotics (အိပ်ဆေးများ)
23.2.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
20.2.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
Anti-anxiety & Panic Disorder Medicines (စိတ်ငြိမ်ဆေး)
17.2.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
14.2.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
I. Monoamine Oxidas Inhibitors ( MAOIs စိတ်ကျရောဂါကုဆေး)
Bipolar Disorder Medicines (စိတ်ကျစိတ်ကြွရောဂါကုဆေး)
11.2.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
ဥပမာ 1. Carbamazepine
2. Divalproex Sodium
10.2.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
Antimycobacterials (TB ရောဂါကုဆေး)
9.2.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
8.2.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ